Hadaaftimo - Wikipedia
Lua error in Module:Location_map at line 502: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/Somalia" does not exist.Meesha kaga taalo Soomaaliya.
Dhacdaa: 10°46′00″N 48°06′00″E﻿ / ﻿10.76667°N 48.10000°E﻿ / 10.76667; 48.10000Isuduwe: 10°46′00″N 48°06′00″E﻿ / ﻿10.76667°N 48.10000°E﻿ / 10.76667; 48.10000
Calanka dadka Hadaaftimo waa Maakhir.
Hadaaftimo (Af-Soomaali: 'Hadaftimo') waa magaalo qadiimi ah ku taala waqoooyiga gobolka Sanaag ee Waqooyiga Soomaaliya, maanta loo yaqaano Maakhir. Intaas waxaa dheer, magaalada Hadaaftimo waxaa ku yaala qaar ka mid ah dhismayaasha ugu qadiimsan taariikhda Soomaalida.
Hadaaftimo waa magaalo aad u baaxad weyn, waxayna ka mid tahay degmooyinka Gobolka Sanaag. Waxay ahayd magaaladii labaad ee ugu faca weyn gobolka sanaag ee dalka Somalia. Magaalada hadaaftimo waxaa la asaasay daartii ugu horaysayna laga dhisay 1966. Waxaa halkaas ka dhistay daar nin la oran jiray Calishire Bootaan Maxamed Xasan. reer bootaan qoyska layiraahdo , waxay ahayd meel dooxa ah oo aad loo degan yahay, waxaana la dhihi jiray Dooxada hadaaftimo , Hadaaftimo hada waa magaalooyinka ugu waaweyn gobolka sanaag, maamul ahaana waxay hoos tagtaa Dowlad Goboleedka Maakhir State Magaalada hadaaftimo waa magaalada uu degaanka ku yahay Suldaanka Guud ee gobolka sanaag Suldaan Siciid Suldaan C/salaan Suldaan Maxamud Cali Shire. Saldanaduna waa mid Soo jirtay ilaa 700 oo sano. Magaalada hadaaftimo waxaa kalo oo degen suldaan xasan cali jibriil oo ah salaadiinta gobolka. Degmeda hadaftimo waxay ka mid tahay degmooyinka aad ugu soo korooyo degaanada Maakhir stet hadaftimo waxay ku taalaa buuraha golis ee soomalia nolosheedu waxay ku tiirsan tahay xoolaha nool sidoo kale
Hadaaftimo waxa ku yaala sida caadiga ah iskuulada hoose dhexe iyo sare waxana kaso baxda arday dhan walba ka dhisan.
Hadaftimo waxay kutaala dooxo kaso bilabata buuraha gollis. Waa dhul carro san waxayna hodan ku tahay caradeedu oo ku fican tahay beerashada, iyo xoolo daaqsinkaba. Hadaaftimo waxay 30km u jirta magaalada badhan oo dhanka bari ka xiga. Caasimada gobolka ee ceerigaabo waxay u jirtaa 90km. Hadaafftimo waa degmo aad u weyn isla markaana ku caan baxday xadaarad iyo il-baxnimo.
Cimilada waa kuwo aad u fiican isla markaana qof walba si dhib yar ula qabsan karo. Bilaha March, April, iyo May waxa ka da'a roobabka gu'ga , bilaha June, July, iyo Uagosto waxa ka dhaca xagaaga, Halka bilaha september, octobar, iyo noveber waxa ka da'a robab yar aan le ekayn kuwii gu'ga , bilaha December, January, iyo, Feb waa wakhtiga jilaalka dhaxan yarna wa ka dhacdaa.
Daawo muuqaalka magaalada Hadaaftinimo
↑ Worldstatesmen - Maakhir
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Hadaaftimo&oldid=197266"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 04:56, 28 Nofeembar 2019.